Kurumidza Tendeuka Prototype - Pandawill Technology Co, Ltd
Pandawill inonzwisisa kuti nguva yakakosha kwazvo kana iwe uri kutsvaga kubvumidza prototype kana kugadzira batch mutyairi wePCBs kugamuchirwa kwemvumo. Isu tinoziva zvakare kuti iwo chaiwo mapurojekiti anomhanya panguva kana kutanga, uye kazhinji kukurumidza kwe prototype batch ndeyechokwadi chaizvo.
Yedu CAM Injiniya dhipatimendi ichaona kuti hapana nguva inorasika mukuwana yako prototype dhizaini mukugadzira uye kuendesa nenguva. Tinogona kuburitsa yakapusa isina-mativi uye yakapetwa kaviri mativi PTH dhizaini mumaawa makumi maviri nemana mumavhoriyamu madiki uye maawa 72-96 ema multilayer anosvika masere masere. Zvemabhodhi anokurumidzira, Ndokumbira utizivise pamberi kuitira kuti tigone kuona kuti iyo data inoitwa miniti yatinogamuchira yako data. Uye isu tichava nechokwadi chekuti hapana nguva yakarasika mukati mekugadzira maitiro.
Chikamu Kurumidza Turn prototype Yakajairwa Lead Nguva (diki batch)
2 akaturikidzana Mazuva maviri Mazuva mashanu
4 akaturikidzana 3 mazuva 6 mazuva
6 akaturikidzana Mazuva mana Mazuva manomwe
8 akaturikidzana Mazuva mashanu 8 mazuva
10 akaturikidzana 6 mazuva Mazuva gumi
Yese data inodzorwa kuitira kuti inotevera shanduko kune vhoriyamu yekugadzira ive nechokwadi chekuenderera zvachose pakati pezvinhu uye dhizaini inoshandiswa kubvumidza iwo prototypes uye huwandu hwehuwandu hwekugadzira. Pandawill Circuits isarudzo yakanaka yebasa rako reprototype uye isu tinobatsira kukwidziridza dhizaini uye marongero eprototypes ako kuti uwane yakaderera mari inogoneka yemavhoriyamu ako anotenderwa ekugadzira.
Taura nePandawill uye isu tichabatsira kukurumidza kwako kumusika.